Olee otú Gbanwee Data si gam akporo ka Windows ekwentị?
The Microsoft Lumia usoro zụtara Windows igwe n'ime ama, na ọrụ na-achọ na Windows smart ntị n'ihi na oge mbụ dị ka onye ọzọ Android igwe. Ihe-arụ ọrụ maka Windows igwe ndị ọhụrụ anya, mma ụdịdị, na ezi ihe ụfọdụ ahịa si Nokia.
Windows bụ ihe ọzọ na-ewu ewu OS maka ama ọrụ. Otú ọ dị, ịmafe si gam akporo ka Windows ekwentị bụ obere trickier n'ihi na nke iche iche sistem. Dabara nke ọma, data nwere ike bufee na ụzọ ole na ole. Ọ bụrụ na ị chọrọ ndị kasị ụzọ, ị ga-achọ ọzọ software ime ka nyefe. Ọ bụrụ na ị na-adịghị njikere na-emefu, e nwere ụzọ ole na ole na-eme ka Data nyefe.
1. Ngakọrịta nhọrọ si Windows
2. Mmekọrịta site na ígwé ojii
3. Nyefee data na Wondershare Mobiletrans ke kiet ke otu click
Mmekọrịta nhọrọ si Windows
Windows-ekwe ka ị ka mmekọrịta gị na Google akaụntụ. Google akaụntụ jide otutu gị ochie Android ekwentị data dị ka kọntaktsị, kalinda, google gbakwunyere photos, wdg a bụ usoro na i nwere ike iji mmekọrịta gị Google akaụntụ Windows
1. Site ochie ekwentị eme ka n'aka gị data na-synced ka Google akaụntụ na a na-eji on Android. Ugbu a, na-ọhụrụ gị Windows ekwentị. Gaa Ntọala na ngwa na mgbe ahụ gaa 'email + akaụntụ' ntọala.
2. Ugbu a, ị ga-ọtụtụ nhọrọ na okwu nke na-agbakwunye otu akaụntụ gị windows ekwentị. Họrọ Gmail akaụntụ na ibà gị Gmail nzere akaụntụ banye. Ugbu a dị họrọ kalenda, kọntaktị, ihe aga-eme, na email mekọrịta na ọhụrụ gị na Windows ekwentị.
Ị nwere ike iji ndị ọzọ akaụntụ mekọrịta data. Dị ka i nwere ike iji Facebook iji mekọrịta photos ma ọ bụrụ na ị na-echekwa gị kasị nke foto na Facebook akaụntụ. Otú ọ dị, usoro a nwere ya uru na ọghọm.
Usoro a bụ mfe mmekọrịta gị na kọntaktsị, kalinda, ozi ịntanetị na online media si ịkparịta ụka n'Ịntanet saịtị.
Ị nwere ike iji otu Gmail akaụntụ ahụ na windows ekwentị na ị na-eji maka gị ochie Android.
Usoro a ana achi achi nchebe zuru ezu gị data.
Ị nwere ike iji Outlook jikwaa a data.
Ị nwere ike ijikọ Gmail, Facebook, Outlook, Yahoo na akaụntụ ọzọ ọ bụla ị na-eji mgbe nile.
Nnukwu mwepu nke usoro a bụ na i nwere ike na-mmekọrịta data na bụ ugbu online.
Data dị ka ngwa, foto echekwara na gị Android-apụghị bufee.
Ozi ederede-apụghị kpọfere Windows ekwentị. Naanị ngwa dabeere ozi dị ka Facebook ozi ma ọ bụ WhatsApp nwere ike synced si ngwa nkesa.
Mmekọrịta Via Ígwé ojii
Otu Drive bụ Windows ngwaahịa na ngwa na-echekwa unu Windows data na Otu mbanye. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee gị faịlụ, ọ pụrụ ịbụ ezi ụzọ nyefee data. Otú ọ dị, ị ga-aka bulite data gị android ka Onye Drive na mgbe ahụ ibudata ya na gị na Ohere ekwentị.
Ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu nyefee Data na iji otu Drive:
1. Download otu Drive na gị Android ekwentị na wụnye ya.
2. emeghe App na abanye na-eji nzere na ị ga-eji na gị Windows ekwentị. Ugbu a, na nri ala nke ngwa a ga-enwe gbakwunyere ịrịba ama. Dị pịa na ya na-ahọrọ ụdị nke faịlụ ị chọrọ bulite.
3. Ugbu a na-agagharị site na android ekwentị ma họrọ faịlụ na ị chọrọ bulite. Ozugbo faịlụ a họọrọ, dị họrọ bulite si n'elu nri akuku na gị na ihuenyo.
4. Ugbu a gaa gị Windows ekwentị na-emeghe One Drive ngwa na iji nzere eji maka Android ngwa.
5. The faịlụ ga-akpaghị aka synced na ekwentị gị ma ọ bụ nanị na-agagharị na faịlụ na enweta na ya ibudata ya na ekwentị gị.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmekọrịta kọntaktị iji usoro a. Mbupụ na kọntaktị na .CSV faịlụ site na android na bulite ya One mbanye. Ị nwere ike imeghe CSV faịlụ site One Drive on Windows ekwentị.
Ya mere, gịnị ka i kwesịrị iburu n'uche mgbe iji usoro a? Ebe a bụ a ngwa ngwa anya.
Usoro a dị ukwuu n'ihi na-ebufe nnukwu faịlụ dị ka vidio, na photos. Ọzọkwa, akwụkwọ faịlụ nwekwara ike bufee.
Gị ọzọ akara n'elu faịlụ dị ka ị na-ahọrọ ha aka site na ekwentị gị.
Ị nwere ike bulite na ọzọ haziri ahazi ụzọ ahụ dị ka One Drive na-enye gị nhọrọ ike ọhụrụ nchekwa.
Ọ bụrụ na ị nọwo na-na iji One Drive na gam akporo, ị na-eme Onye na Drive ndabere ịzọpụta nhọrọ maka Igwefoto foto na vidiyo.
Otu Drive bụ ngwaahịa na ngwa na Windows N'ihi ya, na-eji otu nzere gị faịlụ ga-akpaghị aka synced ka windows ekwentị.
Usoro a nwere ụfọdụ mmachi dị ka ị pụrụ kpọmkwem mmekọrịta kọntaktị, ozi na kalenda.
Ị ga-enwe iji jide n'aka na file size n'okpuru size ịgba nke free One Drive akaụntụ.
Ọ dịghị onye na click nhọrọ, ị ga-aka ịhọrọ faịlụ na nchekwa ị chọrọ ka mmekọrịta site na iji ihe nchọgharị faịlụ na gam akporo ekwentị.
Ị na-achọ ezi njikọ Ịntanetị dị ka ị ga-ebugote faịlụ na mgbe ahụ nbudata ha na gị na Windows Phone.
Ma ndị nhọrọ dị ukwuu mgbe ọ na-abịa na-ebufe data gị Android ekwentị gị Windows ekwentị. N'eziokwu, eziga data n'elu ígwé ojii nwere ike iji elu tọn gị internet data na otú ọ bụ ihe amamihe nyefee data na enyemaka nke mmekọrịta. Nke a ga-hụ na ị na-adịghị ejedebe okodu tọn on data nyefe.
Nyefee Data Iji Wondershare Mobiletrans
Wondershare Mobiletrans, a otu-click ekwentị na-ekwentị transfer ngwá ọrụ, ọ na-tumadi iji nyere aka na ị nyefee data n'etiti igwe na mbadamba na-agba ọsọ iOS, Symbian, Windows, na Android. Na ya aka, ị nwere ike nyefee dị iche iche ụdị faịlụ na ụdị n'etiti gị Android ekwentị, Symbian ekwentị, WinPhone na iPhone ke kiet ke otu click.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute si download buttons n'okpuru.
Otú nyefee Photos, Videos, Music faịlụ site na Android ka WinPhone.
Nzọụkwụ 1: Open Wondershare Mobiletrans na kọmputa gị na jikọọ na Android na ngwaọrụ ma WinPhone na kọmputa. Mobiletrans ga recogize ma ngwaọrụ na sekọnd ole na ole.
IHE: Mgbe ị jikọọ ma ngwaọrụ, ị nwere ike ịgbanwee na isi iyi na ebe ekwentị mkpanaaka na site na ịpị "tụgharịa" bọtịnụ na usoro.
Nzọụkwụ 2: Wondershare Mobiletrans pụrụ ịkwado nyefee Photos, Videos, Music faịlụ ozugbo si gam akporo ka WinPhone. Họrọ faịlụ na ụdị mkpa ka ị nyefee na pịa Malite Nyefee. The faịlụ ga-agafere lekwasịrị ekwentị na a nkeji ole na ole. Biko Akwụpụla ma ngwaọrụ n'oge usoro.
Mfe iji. Adịghị achọ ihe ọ bụla ọmụma nkà na ụzụ hazie. Dị mfe ojiji.
Ọ bụghị Free.
Otú nyefee Videos si camcorder ka Computer
Mfe Ụzọ Nyefee ozi ederede site na iPhone 6 ka Mac / Windows PC
2 Ụzọ nyefee faịlụ site Cheta 2 na-Cheta 3
2 Ụzọ Nyefee Data si Nexus 4 ka Nexus 5
Olee otú ka Wepụ Audio si MOV Files (QuickTime) na Windows / Mac
Otú nyefee OS si a Draịvụ-ọzọ otù
> Resource> Nyefee> Olee ka ịgbanwee Data si gam akporo ka Windows ekwentị?